ल हेर्नुस भारतमा यसकारण पनि भाइरल बन्दैछिन नेपालकि श्रृङ्खला खतिवडा… – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > ल हेर्नुस भारतमा यसकारण पनि भाइरल बन्दैछिन नेपालकि श्रृङ्खला खतिवडा…
admin November 29, 2018 मनोरञ्जन 0
एजेन्सी। यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छिन् मीस नेपाल श्रृंखला खतिवडा । भोटिङको आधारमा सर्वाधिक माथि भएकि यि सुन्दरी मिस नेपाल बन्ने लक्षण देखाइरहेका बेला भारतमा पनि श्रृखलाको चर्चा चलिरहेको छ । श्रृखलालाई शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुतको एक डान्स भिडियो यतिबेला निकै भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोमा मीरा आफ्ना बुवा विक्रमादित्य राजपुतसँग डान्स गरिरहेकी छन्। बुवा–छोरी ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर’ भन्ने गीतमा डान्स गरेका छन्।
भारतीय अनलाईन दैनिक भाष्करले मीस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई मीराको डुब्लिकेट भएको जनाएको छ। देश झाल्किने बिभिन्न प्रस्तुती दिइरहेकी श्रृंखला अहिले भोटिङमा टप एक नम्मबरमा रहेकी छिन् । अन्य देशकाले समेत सपोर्ट गरेको र श्रृंखला स्वंमको प्रस्तुतिले पनि यो पटक उनलाई मिस वर्ल्ड को दाबेदार मानिएको छ ।
यसैबिच भोटीगंमा श्रृखला अहिलेसम्म शीर्ष स्थानमा भए पनि नाइजेरीयाकी सुन्दरी अनिता उकाले कडा टक्कर दिएकी छिन् । अनिता श्रृखला भन्दा थोरै भोट प्रतिशतले मात्र पछाडी छिन् । श्रृखलाले ७ लाख १५ हजार ५ सय ७४ भोट ल्याउयँदा नाइजेरीयाकी अनिताले ६ लाख १२ हजार ५ सय ७४ मत पाएकी छिन् ।
जुन मत प्रशितलमा २८ हो । शृखलाले ३३ प्रशित मत ल्याउँदा अब अनिताले श्रृखलालाई प्रतिशतका आधारमा भेट्याउन जम्मा ५ प्रतिशत बाँकी रहेकाले श्रृखलालाई अनिताले कडा चुनौती दिएकी छिन् । जसका कारण नेपालले पहिलो पटक पाएको यो सुनौलो अवसरलाई नेपाल र नेपालीले सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ । भोट गर्ने आज अन्तिम दिन भएकाले नेपाली चेली श्रृखलालाई भोट गर्नु र जिताउनु हामी सबैको कर्तब्य समेत हो ।
OMG! यस्तो दुःखद खबर… बलात्कृत युवतीलार्इ सडकमै यस्तो बिजोग, लाञ्छना समेत लगाएपछि… भिडियो
स’म्ब न्ध वि’च्छेद कस्तो मानिसको सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ….
श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमती गर्भवती,भन्छिन्: ‘सपनामा आउने गर्थे श्रीमान्